Mail evela pa parlour luncedo kule theyibhile ukuze ukhethe
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Mail evela pa parlour luncedo kule theyibhile ukuze ukhethe
Xa nesendlu pa, iye uthumele ishishini ye-imeyile ngale mini njengoko imisebenzi yokusebenza. E-mail lelona, ??kusasa evulekileyo phambi sasemini, baba baninzi o parlour ukuthumela ngokuhlwa nasebusuku izihlandlo ezine. Ngexesha umcimbi omkhulu, oko ngakumbi ukwanda. Eposini wanikela nto emails ngemini enjalo, ethetha imeyile elungileyo luncedo, ke iposi ngobusuku nje phambi kokuba sivale evulekileyo phambi imeyile kusasa.
Okokuqala, iposi kusasa, kodwa ndifuna ukuba ujonge ezona ngokuqinileyo-imeyile. Iindawo imodeli kunye umsitho obanjelwe ixesha lemini okanye, kukho indlela yokuba ngumlomo ka Xintai, kuba iqamele email abaninzi kusasa, ukuba ugcine ngcono ukubukela siqinile.
Ukongeza, imodeli ukuba nomtsalane ngoonobumba umbala ngqindilili, ucinga akuthandabuzeki ukuba umfuziselo ubeke amandla ngaloo mini. Kodwa ndifuna ukuba uqaphele ukuba, kwimeko ongumzekelo isiganeko iintsuku eziliqela yaba efanayo, xa titular imodeli isiganeko ke, kukho kunjalo bomashini ekuphulukenwe nalo.
eposini kusasa ngemihla, unako kwakhona ukubona ngeziboniso loo mcimbi Gase. Kwaye, kulula ukuba ukufumana ezininzi kule imeyili, kodwa ivenkile of ezixhasayo. Nditsho ushishino oluqhelekileyo, okanye umhombiso engaqhelekanga ngeenxa igama imodeli, kwimeko apho umbala yangasemva ngexesha lomnyhadala okanye utshintshiweyo ezimnyama, ukuba umba ngamandla xa kuthe kwemini, kukho iimeko ezininzi yesibheno I.
kusasa imeyile elibe pa, kuba lishishini kuthetha ukutsala abaxumi, inxalenye isibheno ngaphezu kwelinye, kufuneka ume ngaphandle. Ukongeza, nceda ubone Phawula kwakhona la magama.
Umzekelo, kwimeko ejolise ibhola ngaphandle kummandla ilungileyo, ukuba unako kukho intembelo ngokwenene, isibheno okungeyomfuneko, afana nelo inkokhelo inamandla kwaye dubulo imali, njl njl, wena ixesha enkulu out kukuthi, ekubeni kukho iimeko ezininzi ezisebenzayo ejoliswe iziganeko, ayikhathalelwa kusetyenziso ilizwi efunekayo.
Okulandelayo, ndifuna ukuba ushiye i email ukuqinisekiswa iposi ebusuku eyibeka ezivaliweyo nje ngaphambili. I
ebusuku mail , Ekubeni sele kuluhlu lwabadlali zayo sunrise ibhola kunye ngemini elandelayo ulwazi lomcimbi, kubalulekile ukuba ucinge besilwela i yosuku olulandelayo. Noko ke intlawulo ranking, intlawulo ngenxa yokuba kusenokwenzeka ukuba upose Te plus encinane, ndicinga ukuba kuhle ukuba zifake umyalelo ngokubhekiselele ukukholwa liphela.
, Noko ke, ukuba ukufika ukubeka igama imodeli ligama mfuziselo ngokwenene ngaphandle, kungokuba phantse, ukuze banikeze ingongoma. Ukongeza, i-imeyile njengesiqhelo engavumelekanga ngaphandle kwexesha, ngenxa yokuba kukho kwakhona ityala apho kukho inkcazelo ekhethekileyo, nceda qiniseka ukuba ukuhlola.
ngakumbi ngolu hlobo, esiza ulwazi olulodwa wathumela, kubonakala ukuba abaninzi ngokuhlwa yangaphambili ukususela emva kwemini. Ngokuhlwa, ngokuba lifikile ixesha lokuba ukusebenza onyukayo, kuya ulithumele loya kuyo ngokwemvelo, abo waqaphela kwangethuba ifunyenwe.
ukuze uphume uhlobo pa parlour leyo ngeposi, funda iivenkile yobugcisa, yintoni enokunceda okanye ulwazi, kwaye uzame ukuhlalutya kuwe ngeposi kuba nenjongo.